အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ရှာရမည်နည်း FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ငါဒီခေါင်းစဉ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မျှော်လင့်နေစဉ်, ငါ့ကိုသင်အားနည်းချက်များကိုအပေါ်သမိုင်း, သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်အနည်းငယ်ပြောပြပါရစေ။ လုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်များစွာသည်ကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြားသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပြီး၊ များစွာသောမွမ်းမံမှုများသည်လုံခြုံရေး bug များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ငါဤအမှားများကိုမည်သို့တွေ့ရှိပြီးမည်သို့အသုံးချသည်ကိုအနည်းငယ်ပြောပြလိမ့်မည်။ this သို့သော်၎င်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်မှုရရှိရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုရှင်းလင်းသွားပါမည်။
1.2 ကျနော်တို့ 80s မှခရီးစဉ်အပေါ်သွားပါ
2 Buffer Overflow ဆိုတာဘာလဲ
7.3 အစီအစဉ်ကို Debugging
ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အသုံးချဖို့သင်ယူခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအားနည်းချက်ကိုပဲအာရုံစိုက်တော့မှာပါ Buffer Overflows, ဒီအားနည်းချက်အတွက်ကျနော်တို့ပျော်စရာအမှုအရာလုပ်ဖို့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာစိစစ်အတည်ပြုမရှိခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူ။ it ဒါပေမယ့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပိုရှင်းပြကြကုန်အံ့။
ကျနော်တို့ 80s မှခရီးစဉ်အပေါ်သွားပါ
ငါပြသမည့်အရာကိုငါပြသမည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယင်းသည်ယနေ့ခေတ်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ concepts ဤအယူအဆအများစုကိုအကာအကွယ်မဲ့နည်းလမ်းများနှင့်ရှောင်ဖယ်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးချပြီးဖြစ်သည် သူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်😛သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်နေရာတည်းသို့ပြန်ပို့ပေးသည်၊ ထိုအရာအားလုံးကိုပြောပြရန်နေရာမရှိပါ
ငါအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာကိုအသုံးပြုတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်အစကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်တယ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကများလွန်းပြီးမတူကြဘူး၊ မင်းစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါလိုမျိုးဘဲထွက်လာနိုင်သကဲ့သို့ အထူးသဖြင့်ဤနိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်စကားလုံး ၃၀၀ ကျော်ကိုယူထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အချက်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းရောက်အောင်ပြောနိုင်သည်။
ဒီအဖြေကိုရရန်ပထမ ဦး ဆုံးပေါင်းစပ်မှု၏ပထမတစ်ဝက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရမည်။
အရာအားလုံးသည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိမှတ်ဉာဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ခန်းတစ်မျိုးမျိုးရှိရမည်ဟုယုတ္တိရှိသည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောတဲ့အခါ သွင်းအားစု o အကျိုးရလဒ်များကျွန်ုပ်တို့သည်အယူအဆကိုတိုက်ရိုက်လာသည် ကြားခံ။ တိုတိုကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ် ကြားခံ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသည့်မှတ်ဉာဏ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုသိုလှောင်ထားလိမ့်မည်
Stacks များဟုလည်းလူသိများသည်၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှစိတ္တဇဒေတာအမျိုးအစားဖြစ်သည် stack သတင်းအချက်အလက်, သူတို့ရဲ့အဓိကဝိသေသလက္ခဏာကိုသူတို့မှာယူရှိသည် LIFO (နောက်ဆုံးအနေဖြင့်)။ ပန်းကန်တွေအကြောင်းတစ်စက္ကန့်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ သူတို့ကိုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်တစ်ခုစီတင်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုထိပ်ကနေတစ်ခုချင်းစီထုတ်ထုတ်လိုက်တယ်၊ ဒါဆိုငါတို့နောက်ဆုံးထည့်ထားတာက (အပေါ်ဘက်မှာပါ) ) ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ယူမည့်ပထမဆုံးပန်းကန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြားတစ်ချပ်သာထုတ်ယူနိုင်ပြီး၎င်းကိုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သိနိုင်သည်။
အခုသင်အဲဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုသိပြီဆိုရင်၊ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စနစ်တကျစီစဉ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့် stacks များသည်အရေးကြီးသည် ကွပ်မျက် stack။ သို့သော်ဤ stack တစ်ရှိပါတယ် အထူးသဝိသေသ, ကြီးထွားလာတယ်။ သင်သိရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာပရိုဂရမ်တစ်ခုလည်ပတ်နေစဉ်၊ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခေါ်သည့်အခါ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်ရှိ X နံပါတ်မှနံပါတ် (Xn) သို့သွားသည်။ ဒါပေမယ့်ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်အယူအဆကိုနားလည်ရမယ်။
၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မာများစွာကို C လောက၌စတင်သောအခါအရူးအမူးဖြစ်စေသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏ပရိုဂရမ်းမင်း၏စွမ်းအားသည်ထောက်ပြခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းအောင်ထားရန်၊ မှတ်ဉာဏ်လိပ်စာတစ်ခုသို့ညွှန်ပြသည်။ ဒီဟာကရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မရှုပ်ဘူး၊ ငါတို့အားလုံးမှာစက်တွေမှာ RAM ရှိသလား။ ကောင်းပြီ, ဒီကိုတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် လုပ်ကွက်များ၏ဆက်တိုက်အစီအစဉ်ဤတည်နေရာများကိုများသောအားဖြင့် hexadecimal နံပါတ်များ (0 မွ9မွ A သို့ F သို့ 0x0, 0x1, 0x6, 0xA, 0xF, 0x10) တို့မှဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဒီမှာ 0x10 ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မှတ်စုတစ်ခု NO ညီမျှခြင်းသည် 10 15 ဖြစ်လျှင်၊ ဒdecimalမကိန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလျှင် XNUMX သည်ပြောခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ခုထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊
ပရိုဆက်ဆာများသည်အတော်များများနှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် မှတ်တမ်းများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်မှသည်ပရိုဆက်ဆာသို့တည်နေရာများကိုထုတ်လွှင့်ရန်အလုပ်လုပ်သော၊ 64-bits ကိုအသုံးပြုသည့်ဗိသုကာများအတွက်၊ မှတ်ပုံတင်မည့်အရေအတွက်သည်ဤတွင်ဖော်ပြရန်ခက်ခဲပြီးဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်စိတ်ကူးရရန်၊ မှတ်ပုံတင်များသည်ညွှန်ပြသူများနှင့်တူသည်၊ မှတ်ဉာဏ်နေရာ (တည်နေရာ) ။
ကျွန်ုပ်သည်ယခုအထိသတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိသည်ကိုသိသော်လည်းလက်တွေ့တွင်၎င်းတို့သည်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားခံကိုအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်အသေးစားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့သွားတော့မည်။ လျတ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနားလည်ရန်၎င်းကိုချိုးဖျက်ပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းသည်ဒါဟာတကယ့်အစီအစဉ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အသုံးပြုသောတန်ပြန်မှုများကို“ ရှောင်ရှား” သွားမည်ဖြစ်သည်၊ အရာများသည် before မတိုင်မီမည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံနှင့်အချို့သောကြောင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အခြေခံမူများလိုအပ်သည်
ဒီပရိုဂရမ်ဟာ C ပရိုဂရမ်မာတွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ကောင်းကျိုးများစွာထဲမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာအခုထိပြောနေတာတွေ၊ မှတ်ပုံတင်တွေ၊ stack တွေ၊ ကြားခံစတာတွေစတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ခွင့်ပြုတာပါပဲ။ ငါတို့ဥပမာအတွက်သုံးမယ့်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရအောင်။
ဒါကရိုးရှင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုပါ၊ ငါတို့စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးမယ် stdio.h သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့် terminal တစ်ခုထဲမှာပြသနိုင်ဖို့။ ကျနော်တို့ခေါ်တဲ့ function ကိုမြင်နိုင်ပါသည် return_input အရာကထုတ်ပေးပါတယ် ကြားခံ ကိုခေါ် အခင်းအကျင်းအရာ 30 အရှည်ရှိပါတယ်ရာ bytes (char ဒေတာအမျိုးအစား 1 byte ရှည်လျားသည်) ။
လုပ်ဆောင်ချက် gets(array); console ကိုနှင့် function ကိုအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုပါ printf() array ရဲ့ contents ကိုပြန်လာနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြသထားတယ်။
C ၌ရေးထားသည်အစီအစဉ်ကို function ကိုအတူစတင်သည် main()၎င်းသည် return_input ကိုသာတာဝန်ယူလိမ့်မည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အစီအစဉ်ကိုပြုစုမည်။
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်နည်းနည်းယူကြည့်ရအောင်။ ရွေးချယ်စရာ -ggdb gcc ကိုစနစ်တကျ debug လုပ်ဖို့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ program ကို compile လုပ်ဖို့ gcc ကိုပြောတယ်။ -fno-stack-protector ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးမပြုသင့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် stack အတွင်းရှိကြားခံဖြည့်စွက်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဆုံးမှာတော့ငါရလဒ်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ ./a.out ငါစုဆောင်းလိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲ run လိုက်တယ်၊ သတင်းအချက်အလက်တောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ပြန်ပို့တယ်။ အပြေး🙂
ဒီမှာနောက်ထပ်မှတ်စု။ သတိပေးချက်များကိုမြင်ပါသလား ရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဒ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စဉ်သို့မဟုတ် compile လုပ်သည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သာထင်ရှားပြီးယနေ့ function ကိုအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ gets() ကုဒ်ထဲမှာ။ Gentoo ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာပရိုဂရမ်တစ်ခုစီကိုပြုစုခြင်းဖြင့်အမှားအယွင်းများကိုမြင်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးစံပြအစီအစဉ်တစ်ခုမပါသင့်ပါ။ သို့သော်သတိပေးချက်များမည်မျှကြီးမားသောပရိုဂရမ်များသည်အလွန်ကြီးမားသောကြောင့်ခြေရာခံရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာများစွာသောသတိပေးချက်များရှိပါတယ်သည့်အခါအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်
ယခုဤအပိုင်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလုံအလောက်ရေးသားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုရှင်းပြရန်မတတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မြန်လွန်းသည်ဟုသင်မြင်လျှင်စိတ်မကောင်းပါ။ 🙂
ဤသည်၌ငါတို့အဓိက function ကို၏ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ် အစည်းအဝေးငါတို့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာကနားလည်တယ်၊ ဘယ်ဘက်မှာလိုင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာပဲ <+ n> အဖြစ်လူသိများသည် offsetအခြေခံအားဖြင့် function (အစ) ၏အစမှအကွာအဝေး (ဟုလူသိများ) ဖြစ်သည် ကုဒ်) ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစား (push / mov / callq …) နှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမှတ်ပုံတင်များကိုတွေ့မြင်ရမည်။ အကျဉ်းချုပ်ကျနော်တို့ကဒီကအရင်းအမြစ် / မူရင်းနှင့် ဦး တည်ရာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အရိပ်အယောင်ကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ <return_input> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယ function ကိုရည်ညွှန်းပြီးကြည့်ရအောင်။
ဒါကနည်းနည်းပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမင်းစစ်ဆေးကြည့်ချင်တာတွေရှိတယ်၊ tag လို့ခေါ်တဲ့ tag ရှိတယ် <gets@plt> နှင့်နောက်ဆုံး opcode ကိုခေါ် retq function ကို၏အဆုံးကိုညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့ breakpoints စုံ၏စုံတွဲတစ်တွဲ function ကိုအတွက်တ ဦး တည်းထားလိမ့်မယ် gets နှင့်အခြား၌တည်၏ retq.
အခု program ကိုဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ program ကို run နေပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသော opcode ကိုညွှန်ပြသည့်မြှားသေးငယ်တစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုလမ်းကြောင်းသို့ထည့်သွင်းစေလိုသည် 0x000055555555469bဤသည်သည်ခေါ်ဆိုပြီးနောက်လိပ်စာဖြစ်သည် return_input function ကိုအတွက် main သင်လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်ပရိုဂရမ်ပြန်လာသင့်သည်၊ ဤသည်သည်အရေးကြီးသည် input ကို, function ကိုသို့ရကြကုန်အံ့။ အခု function ကိုမဝင်ခင်မှတ်ဉာဏ်ကိုစစ်ဆေးတော့မယ် gets.
ငါအဓိက function ကိုမင်းအတွက် back up လုပ်ထားတာငါမြင်တဲ့အတိုင်းငါရည်ညွှန်းထားတဲ့ code ကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တယ် မင်္ဂလာပါ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်၊ ငါမင်းညွှန်ကြားချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်တယ် 0x7fffffffdbf0 ကွန်မန်ဒိုပြီးနောက်ဘယ်ဘက်မှပထမဆုံးဖြစ်သည် x/20x $rsp) ရရှိသည့်ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည့်နေရာဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လုပ်ပါ။
သူတို့ကိုငါမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြသည် 0x44444444ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ရဲ့ Ds ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်လို့ငါတို့ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီ input ကို ပရိုဂရမ်သို့သွားသည်နှင့်သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိသည့်လိပ်စာမှလိုင်းနှစ်ခုသာဖြစ်သည်၊ ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြသည့်လိပ်စာများမတိုင်မီအထိ၎င်းကိုဖြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဒ်၏ဤအပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြန်လာသော function ကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုကြည့်ကြစို့ we အစားထိုးထားသော opcode တည်နေရာသို့သွားသည်၊ ကျနော်တို့ပြန်သွားလျှင်သင်ဘာထင်သလဲ return_input? ဒါပေမယ့်ဒါအတွက် binary မှာလိုချင်တဲ့ address ကိုရေးဖို့လိုတယ်။ function ကိုသုံးမယ် printf bash မှ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်ကိုနှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါပြီ၊ အကယ်၍ ဤအစီအစဉ်အတွက်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဒ်ကိုချိုး ဖျက်၍ ၎င်းမလုပ်သင့်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဤရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုကိုစဉ်းစားနိုင်သည် exploit အလွန်အခြေခံကျသည်။ 🙂သူသည်အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူလုပ်ချင်သောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်အဆုံးမဲ့နီးပါးနီးပါးစာရင်းပြုလုပ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အမိန့်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းထက်ပိုမိုသောအရာများကိုထည့်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်၊ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုရေးသားခဲ့သည် မင်္ဂလာပါ ဆောင်းပါးတွေထက်ပိုပြီးရေးရမယ့်အကြောင်းအရာ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောခေါင်းစဉ်များနှင့်အနည်းငယ် ထပ်မံ၍ မရှင်းပြနိုင်ပါကစိတ်မကောင်းပါ။ surely အကယ်စင်စစ်ထိုအခွင့်အရေးကိုရလိမ့်မည်။ 🙂နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ဤတွင်ရောက်ရှိလာခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » အားနည်းချက်များကိုခေါင်းပုံဖြတ်ကြည့်ခြင်း
ပိုပြီးတိုက်ရိုက် Be လျော့နည်းရေးနှင့်အရေးပါသောအရာကိုအာရုံစိုက်ပါ
ပြနာကပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတမရှိသောသူများသည်၎င်းနှင့်စတင်ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးလွန်းသောကြောင့်ဘာမှမသိနိုင်သော်လည်းပရိုဂရမ်ကိုတတ်ကျွမ်းသူများသည် ပို၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။
မင်းကလူတိုင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူး၊ မင်းကိုရွေးရမယ်၊ ဒီကိစ္စမှာမင်းဖုံးအုပ်ထားချင်တဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်ပြီးပြီ။
စကားမစပ်ငါအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတယ်၊ ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုငါနှစ်သက်တယ်၊ မင်းဆောင်းပါးတွေ၊ ဂုဏ်ပြုလွှာတွေရေးစေချင်တယ်။
နှစ် ဦး စလုံးရန်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! အမှန်တရားကတော့ဒီဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုတဲ့အဆင့်မြင့်ပရိုဂရမ်းမင်းရှိတဲ့လူ ဦး ရေကနည်းနေတယ်ဆိုရင် (အနည်းဆုံးမှတ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ) အမှန်တရားဖြစ်ရင်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ဆီဘယ်လိုရောက်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။
ငါနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျယ်ပြန့်အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းလိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရိုးရှင်းချင်သောအနေဖြင့်ပြစ်မှားပါပြီ ငါဘလော့ဂ်စတင်ခြင်းစကတည်းကငါစာဖတ်သူများသိသည့်နေရာနှင့်ငါပြောနေသည့်အရာကိုနားမလည်သောနေရာအတိအကျကိုကျွန်ုပ်မသိသေးကြောင်းသင်နားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်အမှန်တရားကိုပြောရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်
ငါ format ကို depersonalizing မပါဘဲထိုက်တန်သောအခါငါတိုတောင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, အကြောင်းအရာနှင့်ရေးသားခြင်း၏လမ်းခွဲထုတ်တ ဦး တည်းစိတ်ကူးလိမ့်မယ်ထက်နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးသည်ကတည်းကငါကအနည်းဆုံးသူတို့ကိုအတော်လေးဆက်စပ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာငါနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင် အကြောင်းအရာဖြတ်တောက်မည့်အစားလိုင်းများထည့်ရန်။
John Heasman၊ Felix Linder နှင့် Gerardo Richarte တို့၏ The Shellcoder ၏လက်စွဲစာအုပ်မှရရှိသောဥပမာကိုကျွန်ုပ် ၆၄-bit ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဗိသုကာ၊ Intel developer လက်စွဲ၊ အတွဲ ၂ နှင့် ၃ ကိုလေ့လာခဲ့ရသည်။ ကြောင်းများအတွက်တော်တော်လေးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်။ 'info gdb' command ဖြင့်ပါ ၀ င်သည့် GDB စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ခြင်းသည်ကောင်း၏၊ Assembly and C ကိုလေ့လာရန်အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်များစွာရှိသည်။ Assembly စာအုပ်များသည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အခြားဖြည့်စွက်ရန်ကွက်လပ်ရှိသည်။ စာရွက်စာတမ်းများရိုက်ထည့်ပါ။
ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ ဘလော့ဂ်ဟောင်း desdelinux ပြန်ပေါ်လာပြီ =)
ဝေးလံခေါင်သီသော shell သည်ထိရောက်မှုမရှိဟုသင်ပြောသောအခါတိုက်ခိုက်မှုကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောတန်ပြန်အစီအမံများကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းကို၎င်းတို့အားထိုးစစ်လုံခြုံရေးဟုခေါ်သည်။
ဖရန့်🙂အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီနေ့ Shellcoding ကဒီမှာငါတို့မြင်ရတာထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကိုငါဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ASLR (ကျပန်းမှတ်ဉာဏ်တည်နေရာမီးစက်) stack protector တစ်ခုရှိသည်၊ program တစ်ခုအတွင်းသို့ထိုးသွင်းနိုင်သည့် opcodes အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်သောအမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာများနှင့်တန်ပြန်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။
free software ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ခေါင်းစဉ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်အခြားအပိုင်းတစ်ခုကိုသင်လုပ်ဆောင်မည်လား။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ခေါင်းစဉ်သည်အမှန်ပင်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှုပ်ထွေးသည့်အဆင့်သည်အလွန်မြင့်မားလာလိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအခြားအကြောင်းအရာများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြရန်ပို့စ်အမြောက်အမြားပါဝင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါအကြောင်းရေးသားလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအောက်ပါပို့စ်များကိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ငါသည်ဤတ ဦး တည်းနှင့်အတူဆက်လက်မတိုင်မီခေါင်းစဉ်အနည်းငယ်ရေးသားချင်တယ်။
အရမ်းကောင်းတယ် che! သငျသညျအကြီးအပို့စ်များကိုပံ့ပိုးကြသည်! မေးခွန်းတစ်ခုမှာ“ IT Security Security” ကို“ အာမခံခြင်းဖြင့်ဘောပင်စမ်းသပ်ခြင်း” စာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ဒီစာအုပ်ကိုအကြံပြုထားပါသလား။ ဤပြissuesနာများကိုကျွန်ုပ်စတင်မေးမြန်းခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုအကြံပြုသနည်း။
Hello cactus၊ အားနည်းချက်တွေကိုစကြာ ၀ isာတစ်ခုလုံးကအခြားသူများအားဖြင့်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအဘယ်အရာပေါ်မူတည်သည်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် IT မန်နေဂျာသည် pen-tester ကဲ့သို့တူညီသောသိရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသို့မဟုတ် forensic လေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး၊ ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့သည်အလွန်ကွဲပြားသောကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတတစ်ခုစီလိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများကိုစတင်ရှာဖွေရန်နှင့်စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်အခြားသူများကိုစတင်ဖျက်ဆီးပစ်ရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာသင်ဖတ်ရှုသမျှကိုခေတ်နောက်ကျနေစေကာမူလက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ဒါကအဆုံးကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုရှင်းပြတဲ့အပြင်၊ Shellcoder's Handbook ဆိုတဲ့အပိုအချက်အလက်အတွက်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဆိုင်းငံ့စာဖတ်ခြင်းရှိသည်😉
အချိန်ပို: Cli နေရာများစွာ၏အချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်